नयाँ भाषा सिक्ने उत्तम तरिका – Vocre
Learningalanguage is easiest when you’re young and your brain is still developing. दुर्भाग्यवश, most of us Americans don’t learnasecond language until we’re in high school — after our brains have developed. भाग्यवश, not all is lost for you if you didn’t learn all the languages before the age of six.
नयाँ भाषा सिक्ने उत्तम तरिका केहि चरण प्रक्रिया मार्फत हो. जबकि तपाईं रातमा दोस्रो वा तेस्रो भाषामा अस्वाभाविक हुनुहुने छैन, यी सुझावहरू र चालहरूले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा कुनै चीज बिना निर्बाध संचार गर्ने मार्गमा प्राप्त गर्नेछ.
नयाँ भाषा टिप सिक्नको लागि उत्तम तरिका #1: सानो सुरु गर्नुहोस्
जब नयाँ भाषा सिक्न आउँदछ, आफुसँग अति कोमल हुनु महत्त्वपूर्ण छ. एकैचोटि नयाँ शब्दावलीको गुच्छा सिक्ने प्रयास नगर्नुहोस्; that’s justarecipe for disaster.
सट्टा, सानो सुरु गर्नुहोस्. नयाँ भाषा सिक्नको केहि उत्तम तरिकाहरूमा जब तपाईं भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ तल समावेश गर्दछ.
लिनुहोस् 10 तपाईको इच्छित भाषामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्दहरूको, र ती सिक्नुहोस्. तपाई सजिलैसँग कुनै पनि भाषामा सब भन्दा साधारण शब्दहरू र वाक्यांशहरूको सूची फेला पार्न सक्नुहुन्छ (यी सूचीहरू प्रायः 100-शब्द लामो छन्).
एउटा शब्द जुन सुरू गर्न सजिलो छ नमस्कार. कसरी भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् नमस्कार अन्य भाषाहरूमा.
एक पटक तपाईले मास्टर गर्नुभयो 10 शब्दहरु (जब तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो निन्द्रामा सुनाउन सक्नुहुन्छ), अर्कोमा जानुहोस् 10 - तर मूल राख्न नबिर्सनुहोस् 10 शब्दहरू तपाईंको यादगार घुमाईमा. तपाईं अचानक खोज्न चाहानु हुन्न कि तपाईं केही महिनामा तिनीहरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्न.
अन्तिम क्रियापदहरू सिक्नुहोस्
नयाँ भाषा सिक्ने सब भन्दा गाह्रो पक्ष हो कन्जगेटिंग क्रिया. तपाईले मात्र सिक्नुपर्दैन (र कण्ठ गर्नुहोस्) शब्द नै, तर तपाईले बिर्सनु पर्छ कसरी बिषयमा आधारित शब्दहरू मिलाउन र क्रियापद विगतमा भइरहेको छ कि भनेर।, वर्तमान वा भविष्य.
यदि तपाईं वास्तवमै क्रियापदहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने, पहिले क्रियाको infinitive सिक्नुहोस्.
एकचोटि तपाईंले केहि शब्दहरू सिकेपछि, तपाईं केहि वाक्यांशहरू सिक्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. कहिलेकाँही शव्दहरू सिक्दै गर्दा वाक्यांशहरू याद राख्नु यो खराब विचार होइन; तपाईं अनिवार्य रूपमा विभिन्न शब्दहरूको प्लेसमेन्टको आधारमा वाक्य संरचना सिक्न सुरु गर्नुहुनेछ.
भाषा टिप्स सिक्दै #2: अनुमान नगर्नुहोस् कि तपाइँ सिधा अनुवाद प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं शब्दहरूको लागि भाषाहरू शब्द अनुवाद गर्न सक्नुहुन्न. अ in्ग्रेजीमा वाक्यलाई छुट्टै शब्दहरूमा तोड्दा तपाईंलाई वाक्यलाई अन्य कुनै भाषामा अनुवाद गर्न अनुमति दिँदैन.
उदाहरण को लागी, वाक्यांश, 'यो मलाई देउ,स्प्यानिशमा अनुवाद गरिएको हो, 'Dámelo।' प्रत्यक्ष अनुवाद हुनेछ, ‘Das esoami.’
व्यक्तिले तपाईंलाई हेर्ने छन् तपाईं जस्तै एक सानो लोको हुनुहुन्छ यदि तपाईंले शब्दको लागि एक वाक्य शब्द अनुवाद गर्नुभयो भने.
भाषा टिप्स सिक्दै #3: भाषा अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
नयाँ शब्दहरू खोज्न सब भन्दा छिटो तरीका भाषा अनुवाद अनुप्रयोग प्रयोग गर्नु हो, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी – तपाईंलाई अनुप्रयोगमा शब्द टाइप गर्न अनुमति दिन्छ वा, तपाईंको फोनको माइक्रोफोनमा एक शब्द वा वाक्यांश बोल्नुहोस् र अनुवाद सुन्नुहोस्.
का लागि हाम्रो निश्चित सूची जाँच गर्नुहोस् अन्तिम मिनेट यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग अधिक उपयोगी अनुप्रयोगहरूको लागि.
भाषा टिप्स सिक्दै #4: उच्चारण विषयवस्तु
अमेरिकीहरू उच्चारणको साथ एक सानो laissez faire प्राप्त गर्न प्रयोग गर्दै छन्. यो हुन सक्छ किनभने हामी यु एस मा धेरै फरक उच्चारण सुन्नुहुन्छ।!
म्यासाचुसेट्सको अंशहरूमा, कसैले भनेको सुन्नु असामान्य कुरा होइन, “Pah-k the cah at Hah-vahd Yahd.”
धेरै अन्य भाषाहरूमा, उच्चारण बढी महत्त्वपूर्ण छ. एक शब्दको गलत अर्थले तपाईंलाई समस्यामा पार्न सक्छ - वा पूर्ण रूपमा शब्दको अर्थ परिवर्तन गर्न पनि.
भाषा टिप्स सिक्दै #5: बच्चाहरू पुस्तकहरू पढ्नुहोस्
नयाँ भाषा सिक्ने सब भन्दा रमाईलो तरिका मध्ये एउटा भनेको बच्चाहरूको पुस्तकहरू पढ्नु हो - विशेष गरी जसलाई तपाई आफैले आफैलाई बच्चाको रूपमा मन पराउनुहुन्थ्यो.
सानो सुरु गर्नुहोस्. “सानो राजकुमार,” “Winnie the Pooh” or “Where the Wild Things Are” are great starting points.
एकचोटि तपाईंले नयाँ भाषामा राम्रो ह्यान्डल पाउनुभयो, अध्याय पुस्तकहरु मा सार्नुहोस्, जस्तै "ह्यारी पॉटर।" कुमाले पुस्तकहरू उनीहरूको पाठकहरूसँग 'बढ्न' लेखेका थिए, त्यसोभए तपाईं पुस्तकबाट पुस्तकमा जानुहुँदा तिनीहरू अझ गाह्रो हुनेछन्.
भाषा टिप्स सिक्दै #6: Watch Your Favorite Shows/Movies
यदि तपाईं आफ्नो सुन्ने र बुझ्ने क्षमता सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको मनपर्ने टिभी कार्यक्रमहरू र फिल्महरू अर्को भाषामा हेर्नुहोस्.
तपाईंले सयौं पटक देख्नुभएको फिल्म छनौट गर्नुहोस् - र स्पेनिशमा हेर्नुहोस्. तपाईंलाई सायद थाहा हुनेछ प्लट-वार के हुँदैछ, र तपाइँ सिक्नुहुनेछ कसरी स्प्यानिशमा संवाद भन्न.
भाषा टिप्स सिक्दै #7: लिनुहोस् ठाउ
यदि तपाईं प्राग गर्न विमान टिकट किन्न सक्नुहुन्न, आफ्नो शहर वा शहर मा चेक पड़ोसी को लागी जानुहोस्. स्पेनमा जान सक्दैन? स्प्यानिश Harlem को लागी जानुहोस्.
जे होस् तपाईंको शहर वा शहर सांस्कृतिक छिमेक छैन जहाँ निवासीहरूले तपाईंले सिकिरहनु भएको भाषा बोल्छन्, तपाईं अझै एक मेक्सिकन वा फ्रान्सेली रेस्टुरेन्टमा बाहिर खान सक्नुहुन्छ. वा, तपाईको नजिकको प्रमुख सहरमा यात्रा गर्नुहोस्. यो अझै युरोपको लागि हवाई टिकट भन्दा सस्तो छ.
भाषा टिप्स सिक्दै #9: आफ्नो समय लिनुहोस्
रोम एक दिनमा निर्माण गरिएको थिएन. हात्ती खाने उत्तम तरिका भनेको एक पटकमा एक चम्मच हो. बिस्तारै र स्थिर विजय दौड.
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् त्यहाँ जब यो तपाइँको समय लिने आउँछ. यो किनभने तिनीहरू सत्य छन्. शुभ समाचार यो हो कि यदि तपाईंले आफ्नो समय लिनुभयो भने, you can createalifelong love affair with your new language.
भाषा टिप्स सिक्दै #10: अभ्यास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्
नयाँ उपकरण सिक्न जस्तै, तपाईं नयाँ भाषा सिक्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने अभ्यास. तपाईंले सिक्नुहुने जानकारीलाई कायम राख्न, यसलाई याद गर्न तपाईंले एक कार्य योजना बनाउनु पर्छ.
अधिक तपाईले केहि गर्नुहुन्छ, यो सजिलो हुन्छ. रेडियो कार्यक्रम सुन्नुहोस्, पोडकास्ट र गीतहरू. जब सम्म तपाईं यसलाई सिक्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ - भाषा डुब्नेछ.
बढि चाहिन्छ नयाँ भाषा सिक्नका लागि सल्लाहहरू? हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं.